Home News Itoobiya oo Ambassador Ridwaan Xuseen u Magacaawday Safiirka Eritrea
Qoraal ka soo baxaya dowladda Itoobiya ayaa waxa ay ku magacawday safiirkeeda u fadhin doona dalka Eritrea, mudo sanado badan kadib.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Aby Ahmed Ali ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa lugu magacaabay Danjiraha cusub ee Itoobiya u qaabilsan arrimaha Eritrea, sida ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalkaasi.
Safriika cusub ee Itoobiya u magacawday Eritrea ayaa waxaa lagu magacaabaa Ambassador Ridwaan Xuseen, wuxuuna ka hawlgali doonaa magaalada Asmara.
Labada shacab ayaa soo dhaweeyay magacaabista safiirka cusub, waxayna sheegeen inay sii xoojineyso xiriirka labada dal ee walaalaha ah.
Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo ay ka dhaxeysay colaaad jirsatay in ka badan 20 sano ayaa heshiiyay, waxaana shalay dib u bilowday duulimaadyadii labada dal oo mudo hakad ku jiray.
Previous articleWasaaradda Amniga oo Qorsheeyneeysa qaab Al-shabaab Loogu Fududeeynaayo ineey geeystaan Weeraro iyo Qaraxyo!!
Next articleDowlada Qatar oo ka Dalaaleeyneeyso Soomaaliya Iyo Beesha Caalamka ,Si Malaayiin Doolar loosiiyo Kooxda Qiyaano Qaran
Saadaq Joon oo Amin Ambulance ku wargeliyay in ay tegi...
Somalia makes history by hosting its first ever health research conference...